Global Voices teny Malagasy » Dokambarotra Japoney Nikendrena Ny Vehivavy, Voakiana Noho Ny Tsy Fitiavany Vehivavy. Indray…. · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Febroary 2019 12:00 GMT 1	 · Mpanoratra Sarah Lee Stones Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina
Maneho ny finamanan'ny vehivavy ho toy ny fifampisotasotàna sy fifanafintohinana ilay dokambarotra nalefa ny andro natokana ho an'ny mpifankatia. Pikantsary avy amin'ny IT media, fampiasana araka ny hitsiny.
Efa nesorina eraky ny toeram-pivarotan'ny LOFT moa amin'izao fotoana izao ilay dokambarotra nalefa ny andro natokana ho an'ny mpifankatia, io no farany nivoaka taorian'ireo dokambarotra Japoney maro be izay niteraka resabe tanaty aterineto momba ny hafatra voalaza fa mankahala ny vehivavy .
Navoaka ny 20 Janoary ilay dokambarotra manafintohina ary nesorina ny 4 Febroary  rehefa avy niatrika onjan-tsikera tao amin'ny Twitter.
Vondrona vehivavy “mavo volo” dimy manao akanjo mavokely no tena endrika isehon'ilay dokambarotra, navoaka niaraka tamin'ny hafatra hoe : “mahafinaritra ny hoe vehivavy!” (女の子って楽しい!), iantsoana ny vehivavy rehetra mba hankalaza ny fety miaraka amin'ny vehivavy namany. Raha jerena tsotra, mampiseho vondrona mpinamana mankafy ny andro natokana ho an'ny mpifankatia ilay dokambarotra, sary mifanaraka tsara amin'ny soratra famantarana. Na izany aza, ny lahatsary miaraka aminy (izay efa nofafàna tao anaty YouTube sy ny toerana hafa anaty aterineto) dia misy hevi-petsy hafa miafina.
Nampiseho fifandrimbonana teo amin'ireo mpinamana ireo ilay lahatsary, toy izao fifanakalozana manaraka izao (Pikantsary avy amin'ny IT Media , izay nitatitra ity tantara ity) :
“Moa tsy mahafatifaty ve ny zalahy olon-tiako?” Sary: Pikantsary avy amin'ny IT Media.
“Eny, tahaka ny lehilahy mahafinaritra izany izy.” Pikantsary avy amin'i IT Media, fampiasana araka ny hitsiny
Arahan'ilay teny hoe zuttomo (ズッ友), ireo fifandrimbonana ireo, izay fanafohezana ilay tenin-jatovo hoe zutto tomodachi (ずっと友達) izay midika ho “mpinamana mandrakizay”. Hita ho fanesoana ihany ny fampiasana io teny io, raha jerena ny fihenjanan'ilay resaka.
An'ny iray amin'ireo dimy vavy mpinamana ny sary farany amin'ilay lahatsary izay niara-nankalaza ka nanamarika fa, “Tena tsara ny tsy misy afatsy isika ihany ry vehivavy isany!”
“Tena tsara ny tsy misy afatsy isika ihany ry vehivavy isany!” Pikantsary avy amin'i IT Media, fampiasana araka ny hitsiny
Kanefa, vetivety io endrika ivelany asehon'io hatsaran'ny finamanan'ny vehivavy io dia nampanontany tena ny olona, rehefa nesorina ny lamba nanakona ireo vehivavy mba hampisehoana azy mpinamana variana niady fahefana kely tao, mifampisitom-bolo sy mifampisintona akanjo, nisy mihitsy aza tovovavy nanainga ny zipon'ny hafa.
Pikantsary avy amin'ny IT Media, fampiasana araka ny hitsiny.
Io fanehoana ny finamanan'ny vehivavy ho toy ny fifampisotasotàna sy fifanafintohinana somary afenina io no nikitikitika ny sain'ny olona maromaro, ny sasany aza niantso ny zavatra asehon'ilay dokambarotra ho mampalahelo sy feno sy fitiavana vehivavy.
Raki-tsarobidin-kevitra virtoaly tena miteraka olana izy ity, toy ny hoe “endrika ivelany fotsiny ny finamanan'ny vehivavy,” sy “Natao hanatanteraka ny filan'ny lehilahy fotsiny ny vehivavy” ary “Raha misy vehivavy manainga ny zipon'ny namana iray hafa, dia hihomehezana fotsiny izy . ” Inona no mampirisika ny olona hividy sôkôla an'ny Loft sy hankalaza ny andron'ny mpifankatia amin'izany ? Inona no tsy aritr'ireo mpanao dokambarotra ireo amin'ny vehivavy ? Mampahatsiahy ahy ny an'ny tsy fahombiazan'ny Go Go Tea ilay izy.
Na dia efa navelantsika any aoriantsika any aza ilay resabe momba ny Go Go Tea, dia toa ho nitsangana tamin'ny maty toy ny lolovokatra, indrindra tamin'ilay fampilendalendana ara-barotra mahamay maneso vehivavy. Tsy tokony hajanona amin'izay ve hoy ianao ny karazana zavatra toy izany ?
Tsy zavatra vaovao ao Japàna ny fisiana dokambarotra ahitana fankahalana vehivavy
Toy ny fanamarihan'ny maro mpampiasa Twitter, mampahatsiahy resabe efa nisy teo aloha io zava-nitranga farany io, toy ilay fampielezankevitra manodidina ny dokambarotra an'ny Kirin Go Go Tea .
Ilay dokambarotry ny taona 2016 izay nampiseho sariitatra maneho ny karazana vehivavy misotro dite, anisan'izany “Ilay Ankizivavy Voaozona Mihevitra ny Tenany ho Môdely,” sy “Ilay Ankizivavy Miantehitra Amin'ny Sakaizany Amin'ny Zavatra Rehetra.”
Ilay dokambarotra momba ny dite Kirin dia nanentana tao amin'ny Twitter mba hamerenan'ny olona rehetra hizara indray ilay bitsika raha mahafantatra olona iray mitovitvy amin'izay voafaritra izy ireo, nefa taorian'ireo fanehoankevitra niiba avy amin'ny mpanjifa, nofafan-dry zareo ireo bitsika ary namoaka fialantsiny ny Kirin.
Nitatitra ny HuffPost Japan  hoe :
Maro ireo nametra-panontaniana momba ny fikarakaran'ny Kirin ireo mpanjifany niainga tamin'ny alalan'ny fanehoankevitra toy ny hoe, “tsy hitako izay handikàna an'ito afatsy ny Kirin maneso ireo vehivavy mpividy Go Go Tea “, “Inona izao ny mahafinaritra amin'ny fanaratsiana ny mpanjifanao?” ary “Tsy azoko mihitsy hoe ahoana no nahatonga an'io ho nahadingana ny toeran'ny volavolan-kevitra, raha ny hafa kosa nanapa-kevitra ny hibodo izay vokatra rehetra avoakan'ny Kirin : “Tena nahatohina tanteraka ahy iny dokambarotra iny ka tena tsy te-hividy ny vokatra avoakan'izy ireo intsony aho” ary koa “Dokambarotra tsisy dikany, mitsara, ary maneso ny vehivavy .” […] Indrisy fa tsy hividy ny vokatra Kirin intsony aho. “
Dokambarotra iray hafa nahitàna kiana tahaka izany koa ny an'ny tranom-pivarotana Sogo & Seibu , navoaka tamin'ny Desambra 2018.
Nanasongadinana ilay mpilalao sarimihetsika Sakura Ando, natao hampiroboroboana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ilay lahatsary, saingy noho ny tsy firaharahiana ny lanjan'ilay hiaka mahazatra natao ho fikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ireo vehivavy  tamin'ny fanontaniany hoe : “Tsy mila Vanimpotoana fisandratan'ny Vehivavy isika, sa ahoana ? “
Mahavery hevitra mihitsy ny fisafidianana ny zavatra natao hojeren'ny maso, satria tsy ny fitorahana mofomamy eny amin'ny tava kosa no iheveran'ny olona izany fizakantena izany. Angamba aloha loatra ny filazana hoe tsy ilaina ny “Vanimpotoana fisandratan'ny Vehivavy”, indrindra fa any amin'ny firenena voasokajy ho laharana faha 110 amin'ny firenena 149 eo amin'ny resaka fitovian'ny lahy sy ny vavy .
Mpampiasa Twitter iray no manana teoria momba ny fisehon'ny dokambarotra mpanambany vehivavy any Japana.
Na izany [L]oft, sogo & seibu, na Go Go Tea, manana olana eo amin'ny tontolon'ny dokambarotra natao ho an'ny vehivavy isika izay saika mirona any amin'ny fankahalana vehivavy daholo ary saika ny vehivavy maneran-tany mihitsy no voatohintohina. Angamba antony iray amin'izany ireo lahy antitra sasany lohandohany any amin'ireo orinasa fanaovana dokambarotra izay nanomboka niasa fony mbola tanaty balaonina ary mbola mandoka tena ihany ankehitriny ho nahavita nivelona na dia efa vaky aza ilay balaonina.
Ny hafa indray nifampizara ny fandikana miantra kokoa an'ilay dokambarotra Sogo & Seibu,tamin'ny fijerena ny tontolon'ny fiainana iainana ho toy ny sariteny amin'ny fanamby atoraky ny fiainana amintsika ary nitehaka ny fihenjanan'ny Ando arakaraky ny irosoany hatrany.
Namaky lahatsoratra mikasika ny fanehoankevitra samihafa momba ny dokambarotry ny Loft aho ary nahita fa hay ny an'ny Sogo & Seibu koa niteraka adihevitra marobe. Gaga aho raha nisaina hoe nalefadefaka ilay dokambarotra ary tena tiako ilay izy…
Azo arahina ao amin'ny Twitter  ny tohin'ilay resadresaka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/27/135327/
 Navoaka ny 20 Janoary ilay dokambarotra manafintohina ary nesorina ny 4 Febroary: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190202-00010005-huffpost-soci
 ilay fampielezankevitra manodidina ny dokambarotra an'ny Kirin Go Go Tea: https://vimeo.com/181063531
 tranom-pivarotana Sogo & Seibu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BXE2Q_gzWKM
 tsy firaharahiana ny lanjan'ilay hiaka mahazatra natao ho fikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ireo vehivavy: https://japantoday.com/category/entertainment/
 laharana faha 110 amin'ny firenena 149 eo amin'ny resaka fitovian'ny lahy sy ny vavy: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201812180056.html
 ao amin'ny Twitter: https://twitter.com/search?q=%E3%83%AD%E3%83%95%E3%83%88%E3%81%AE%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%81%8C%E7%82%8E%E4%B8%8A&src=typd